Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovam-panafody - orinasa mpanamboatra fanafody any Sina
Ny syringe mialoha dia karazana fonosana fanafody vaovao novolavolaina tamin'ny taona 1990. Taorian'ny 30 taona naha-malaza sy nampiasana azy dia nitana andraikitra lehibe amin'ny fisorohana ny fihanaky ny areti-mifindra sy ny fivoaran'ny fitsaboana ara-pitsaboana. Ny syringes efa vita dia ampiasaina amin'ny famonosana sy fitehirizana fanafody avo lenta ary ampiasaina mivantana amin'ny tsindrona na ophthalmology, otolojia, orthopaedika, sns.
Ny milina fanaraha-maso mandeha ho azy dia azo ampiharina amin'ny vokatra fivarotam-panafody isan-karazany, ao anatin'izany ny tsindrona vovoka, tsindrona vovo-maina fanamainana, tsindrona tavoahangy / ampoule kely, tavoahangy vera lehibe / tavoahangy plastika IV fampidirana sns.
Tavoahangy famokarana vahaolana tavoahangy IV no ampiasaina indrindra amin'ny tavoahangy vera vahaolana IV amin'ny fanasana 50-500ml, ny fihoaram-pefy, ny famenoana sy ny fijanonana. Izy io dia azo ampiasaina amin'ny famokarana glucose, antibiotika, asidra amine, emulsion matavy, vahaolana otrikaina ary mpandraharaha biolojika ary ranoka hafa sns.